फास्ट स्पीड अलावा फाइभजीमा के छ ? - NA MediaNA Mediaफास्ट स्पीड अलावा फाइभजीमा के छ ? - NA Media
फाइभजी भनेकै तिब्र गतिको इन्टरनेट स्पीड हो । पछिल्लो पुस्ताको यो वायरलेस प्रविधिले डाउनलोड र अपलोड स्पीडलाई अल्ट्राफास्ट बनाइदिने छ । साथै यसले अन्य विभिन्न क्षेत्रमा समेत प्रभाव पार्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं ।
२०१९ मा वास्तविक विश्वमा पहिलोपटक भएको फाइजी स्पिडको परीक्षणपछि धेरै अपरेटरहरुले आफ्नो नेटवर्कलाई अझ धेरै विश्वनीय र सर्वव्यापी बनाउन लगानी गर्न थालेका छन् । ठूला फाइल डाउनलोड गर्न छिटो
फाइभजीको विकासले फोरजीलाई पनि तिब्र गतिको बनाउनेछ यदि कुनै अपरेटर फाइभजी प्रविधिमा जाँदैछ भने उसको फोरजी नेटवर्कले पनि लाभ पाउने देखिन्छ । फाइभजीमा नगएता पनि त्यसमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक उपकरणहरुको हिस्सेदार हुने भएकाले फोरजीको गतिमा समेत विकास हुनेछ ।
एटी एण्ड टी कम्पनीले मात्र २०२० को अन्त्यसम्ममा १५ वटा फाइभजी फोनहरु सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको छ । टी मोबाइल पनि फाइभजी गेममा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।